Seeraar Hardforks waa maxay haddayan? - Blockchain News
Seeraar Hardforks waa maxay haddayan?
Waa maxay fargeeto?
network Seeraar soo martay badan oo fargeetooyin, tan iyo dhalashada of cryptocurrency this ee 2008. fargeetooyin, Kuwanu waxay u maleeyeen in ay gacan looga siiyo si ay u xaliyaan dhibaatooyinka sida scalability, awoodda yar ee TPS (macaamil per labaad), size block kooban, iyo guud ahaan si ay u fududeeyaan dollar network Seeraar ah. Iyadoo Seeraar isagoo ah software isha furan, wixii user on shabakadda koobi karo, beddelo, iyo soo bandhigo xeerar u gaar ah ee xeerka. Sayidka, wax user la abuuro laga yaabaa in hab maamuuska iyo silsilado cusub in arkaa in ay yihiin fargeetooyin,, hardforks kuwaas oo jilicsan ama shabakadda.
Softfork waa isbedel karo hab maamuuska blockchain in uusan looga hortago qanjidhada of silsilad cusub ka xidhiidhka la qanjidhada of silsilad hore. The tusaale softfork ugu fiican waa kala takoori Witness ama SegWit. users Network ayaa firfircoonaan softfork this ee August si ay tayadoodii dhismeedka macaamil block si ay u mashquulin lahaa meel xasuusta ka yar. softfork The oggol yahay blocks si uu u qabto macluumaad dheeraad ah oo aan waxba beddelin shuqulka network Seeraar ah.
Hardfork waa silsilad shabakad cusub oo la sameeyay markii xeerarka cusub aan waafaqsanayn hab maamuuska jir blockchain. Kiiskan, noodes oo ka mid ah shabakadaha cusub iyo wax duug ah ma awoodi doonaan in ay “isgaadhsiin,” tan iyo hardfork tilmaamaysaa beddelo hab loo dhanyahay laftiisa. Iyada oo taageero ka hardforks, dadka isticmaala shabakad isku dayaan si ay u xaliyaan dhibaatooyinka muhiimka ah ee network Seeraar sida bandwidth hooseeyo network u ogolaanaya si loo farsameeyo ilaa toddoba xawaalad halkii size block labaad oo kooban in, sida laga soo xigtay qaar badan oo, waa in ka badan 1 MB xogta. Hardforks sidoo kale u oggolaadaan dadka isticmaala si ay u abuuraan cryptocurrencies cusub, sida kale ee ay u Seeraar.
Natiijooyinka hardforks ee la soo dhaafay
Seeraar XT waa hardfork ugu horeysay network Seeraar, kaas oo lagu qabtay August ee 2015. hardfork The, taas oo ku salaysan yahay code source of Seeraar Core ah, moodayay in ay kor u size block si 8 MB, markaa si ay kordhaan bandwidth network ilaa 24 xawaalad per labaad, laakiin cryptocurrency ma helaan taageerada loo baahan yahay ka soo jeeda bulshada macdanta. Si loo fuliyo Seeraar XT waxaa looga baahan yahay 75% dhammaan macdan qodayaasha network Seeraar in ay galaan network cusub, laakiin kaliya 12% iyaga ka mid ah oo ay taageerayaan hardfork ah. Arrintan la xiriira, mid ka mid ah horumarinta weyn ee Mike Hearn iibin cryptocurrencies iyo bidix mashruuca ee 2016. Sidaas darteed, oo keliya 20 qanjidhada hadhay ka asalka ah 4,000 units, taas oo ka dhigtay shabakadda aheyn xilligan in.
Seeraar hardfork Unlimited ayaa la bilaabay in la beddelo size block ee May 2016, marka macdan qodayaasha waxaa lagu soo jeediyey in la doorto size ee block ee network mustaqbalka. Sida laga soo xigtay macdan qodayaasha, ballaariyo baaxadda block ma baabi'iyo doonaa oo kaliya safka laakiin sidoo kale ay hagaajiyaan faa'iidada iyadoo la kordhinayo tirada guud ee lacagta komishanka ee block. Laakiin dadka dhaleeceeya hardforks, kuwaas oo intooda badan ay ahaayeen horumarinta, ayaa sheegay in qorshahan kordhin karaan suurtagalnimada in barkadaha weyn dhexe ee macdan qodayaasha ay bilaabi doonto in ay ku cayaaraan horumarka shabakadda.
Taasi waxay keentay in macdan qodayaasha la awoodaha hardware xadidan ma awoodi doonaan in ay wax ku ool ah ka qaybgalaan horumarinta network iyo mustaqbalka fog si buuxda loo bedelay lahaa. Sayidka, network noqoneyn dhexe ee dhowr barkadaha. Khubarada ayaa sidoo kale laga helay dhowr cayayaanka ee Seeraar software ah Unlimited, taas oo marka hore ee April, ka dibna bishii May ee sanadkan keentay in la ridey ee 70% ee qanjidhada ee shabakadda, oon ku wiiqayso trust bulshada crypto in mudacyadii, kuwaas oo.
Mashruuca Seeraar Classic ayaa la bilaabay in wax laga qabto dhibaatooyinka scalability network Seeraar, oo aan xalin by hardfork Seeraar XT. Ujeedada mashruuca waxa uu ahaa in la kordhiyo tirada block u 2 MB ka dibna si 4 MB. Laakiin hardfork this ma helaan taageerada lagama maarmaanka ah ee bulshada crypto. Marka aad u bilaabo ka badan 2,000 qanjidhada ka qayb qaatay mashruuca,” laakiin tirada hoos u dhacday 100 by 2017. Bishii November waxaa lagu dhawaaqay in mashruuca la xidho ka dib markii SegWit2X sheegay in la baajiyay iyo horumarinta mashruuca ayaa si cad u taageeray Seeraar Cash, cryptocurrency cusub.
Seeraar Cash malaha waa hardfork network Seeraar ugu caansan oo lagu guulaystay. Sidaas darteed of Protocol-ka hardfork qasbay, Seeraar Cash muuqday on block ah 478,558 on 1 August. Iyadoo qayb ka ah fargeeto, size block kordhay ka 1 MB in 8 MB, iyo kan, markeeda, kor u kacay awoodda network iyo hoos u fii. Ka dib markii hardfork, Kooxda heysata Seeraar lahaa tiro isla'eg oo Seeraar Cash in e-boorsada ay. Shabakadda cusub ayaa la siiyaa qaab ah in ka ilaaliya xawaalad waafaqsan laba blockchains. maanta, 13 December, qiimaha sarifka Seeraar lacagta caddaanka ah waa $1,616.84 iyo waxa ay hadda kaalinta seddexaad by xaraf cryptomarket ah.
Seeraar Gold cryptocurrency muuqday on 24th of October iyadoo ay sabab u hardfork on block ah 491,407 qaadeen by shirkadda macdanta hillaac ASIC ee Hong Kong. Ujeedada mashruucu waa in ay noqoto lacag badan oo soo jiidasho leh, waayo, macdan qodayaasha aan xirfad badan Seeraar asalka. Arrintan la xiriira, Tiro badan oo dadka isticmaala shabakadda kuwayga kartaa Seeraar Gold iyo hal ku dhiga cryptocurrency yahay “dhigi Seeraar mar baahsan.” Halkii Caddeyn-of-Work fikrada jir hardfork maamuuska isticmaal mid cusub, Equihash. geynta Tani waa u nugul size ee helitaanka random xasuusta (RAM) oo sidoo kale loo isticmaalaa marka qodistani cryptocurrency Zcash. maanta, 13 December, sarrifka Seeraar Gold waa $276.88 iyo xarfo suuqa waa ka badan $4.5 billion.
Seeraar Diamond waa hardfork ah, oo markay dhammaadeen ee November on block ah 495,866. macdan qodayaasha Seeraar Diamond abuuro blocks on geynta cusub ee caddaynta shaqada (PoW). Sidoo kale, cryptocurrency this ka duwan mid ka mid ah ugu horeysay oo ay toban jeer kordhiyaan in mugga of qiiqa iyo size of block 8 MB. Horumarinta aaminsan yihiin in hardfork waxa loogu talo si ay u xaliyaan dhibaatooyinka sida la'aanta ilaalinta gaarka ah, xaqiijinta macaamil gaabis ah, oo marinka sare ka qaybgalayaasha cusub inay soo galaan shabakadda. In la abuuro shabakad macdanta Seeraar Diamond, e-jeebka, qanjidhada code, iyo API, iyo sidoo kale in lagu daro code il furan GitHub ayaa la qorsheeyey by dhamaadka sanadka.
Super Seeraar, cryptocurrency cusub, u muuqday on 12 December, oo ay sabab u horyaalka ee network Seeraar on block ah 498,888. The Super dhiga Seeraar waa “dhigi Seeraar mar kale weyn.” Waxaa xusid mudan in halkii ICO dhaqanka madal this isticmaala hab cusub oo soo jiidanaya maalgashi, loo yaqaan Qurbaanka Bilowga fargeeto (IFO). hardfork The bixisaa unit ku kordhin ilaa 8 MB. network wuxuu isticmaalaa technology a hillaac Network oo u oggolaan doonaa qabashada tiro aan xad of micropayments. Waxaa intaa dheer, network Super Seeraar waxaa socda heshiis smart. horumarinta note, si kastaba ha ahaatee, wixii qabatadu ay waxaa loogu tala galay in ay ogaadaan waxay doonayaan bulshada crypto iyo waxa halkii waa tijaabo ah.
Hillaac Seeraar - qeybinta shabakadda ineey dhici doona 23-kii December on block ah 499,999. The horumarinta ee network cusub rabaan in ay isu geeyo tayada ugu fiican ee Seeraar iyo ethereum. Sayidka, ee technology hillaac Network sidoo kale loo isticmaali doonaa in network cusub ee fulinta micropayments iyo DPOS cusub (Caddaynta saamiga wakiishay) hab lagu saleyn doonaa dhanyahay. Si loo kordhiyo unit ilaa 2 MB, taas oo kor u qaadi doonta xawaaraha macaamil ganacsi oo waxaa la filayaa in shabakadda taageeri doono heshiisyada smart. network ayaa sidoo kale yeelan doonaan xawaaraha kordhaysa oo ah block abuuridda cusub oo kor ugu qaadi doonaa si ay u 3 seconds. Iyadoo hardfork ma taageeri SegWit, waxa uu siiyaa difaac ka xawaalad soo noqnoqda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in inkastoo ay u dhowaanin taariikhda la bilaabay, Mashruuca weli in uu qotomiyey website ka shaqeeya.
Seeraar hardfork Good, bilaabay Maal Shiinaha cryptocurrency Chandler Guo, waa in ay ka dhacaan on block ah 501,225, on 25 December. Ganacsade ayaa sheegay in pre-macdanta ma dhici lahaa, halka mugga hawada ay gaarayaan heerka 21 million ahu. Dhowr is dhaafsi stock ayaa horeba u xaqiijiyey in ay la cryptocurrency cusubi u shaqeyn doono, kaas oo lagu hibo si Seeraar heysata at cabirku yahay hal mid ka mid doonaa.
Seeraar Platinum ayaa lagu soo bandhigay sida hardfork shabakad Seeraar, taas oo ahayd in ay ka dhacaan on block ah 498,577 iyo in la abuuro cryptocurrency cusub. Si kastaba ha ahaatee, sida Cointelegraph ayaa sheegay in, hardfork waa fadeexad a abuuray by wiil dhalinyaro ah oo ka South Korea, iyo lacagta laftiisa waa nuqul buuxa oo ka mid ah code Seeraar Cash.
Co-aasaha of ZenCash, Rob Viglione ayaa aaminsan in mudacyadii waa talaabada ugu filan horumarka blockchain:
lafaguro Open-il ayaa loogu talagalay inay xuubsiiban, haddii taasi iyada oo in-mashruuca hagaajinta ama fargeetooyin, taas oo salka code dhan tagaa jihada ah leheyn. Evolution waa geedi socod murugsan, sidaa daraadeed waxa aan mar walba si fiican u soo baxay, laakiin mararka qaarkood in sida kaliya ee ay leeyihiin xalkaas ka weyn.
sameeysa ugu horeeysa ee blockchain in Sweetbridge, Bob Summerville ayaa aaminsan in mudacyadii waa wanaagsan yihiin, sababta oo ah waxay u ogolaadaan xubnaha si ay u go'aamiyaan sida network waa in la horumariyo:
Waxaa jiray sano cabsi, hubin, iyo shaki bulshada Seeraar gudahood ku saabsan Khatarta ah ee mudacyadii adag. Waxaa muuqata la ii sheegay in inta badan qayladii ayaa ka imanaya kooxaha naxa qasab iyo faaf-badan suuqyada xor ah oo xaq u leh inay go'do.
Waxaa wax sida a 'fargeeto xun. "Ma aha in aad waxa farax geliya hal koox ama qof kale oo ku. Tijaabinta iyo tartanka waa wanaagsan yihiin,. Ha suuqa go'aan iyo ka qayb halkaas oo aad ka arki qiimaha.
My waayo-aragnimo waxbarasho ugu qiimaha badan ka Citaah / ETC kala ahaa in silsilado laga tirada badan yahay ayaa lagu dabakhi. Haddii bulshada crypto ayaa farqiyo, ka dibna aad siyaabo kala gooni ah waxaad tagi kartaa, iyo in uu yahay oo kaliya ganaax. Waxaad ka heli furiinka iyo labada guurto on nolol aad, halkii ay ka wada nool murugo weligeedba, si joogto ah ku dooday. "
Laakiin Agaasimaha LOOMIA, Saa'uul Lederer ayaa hal dhibic si buuxda u soo horjeeda ee view:
"Suuqa Saturating la versions kala duwan ee Seeraar waa wareer in dadka isticmaala oo discredits sheegashada in ay jiraan tiro kooban oo Bitcoins-tan aad had iyo jeer waxa ay kabiinka karo iyo laab sahayda,"Sida uyiri Lederer. "Waxa si qoto dheer oo dhib badan waa in wareejin-offs soo baxay ka mid muran yaryar ee bulshada Seeraar oo ku saabsan sida loo maareeyo xadka size block. Halkii soo socda inuu heshiis, bulshada, horumarinta, iyo code waxaa dhaawac kooxo kala duwan. "
xeerarka Crypto a ...